Ukukhazimula njengamaRoma! - Camp Kapelica Teppe A - I-Airbnb
Ukukhazimula njengamaRoma! - Camp Kapelica Teppe A
Sveti Filip i Jakov, Zadarska županija, i-Croatia
Ikamelo e-indlu encane ibungazwe ngu-Filip
U-Filip Ungumbungazi ovelele
Esikhathini esidlule esiseduze neCamp Kapelica yethu yamanje kwakukhona indlu yesonto eyayiyingxenye yeVilla Rustica. I-Villa rustica yayiyindawo yezomnotho eyayisogwini lolwandle futhi yayisetshenziswa izinceku ezivelele zaseRoma.
Namuhla, i-Tepee A itholakala ngaphakathi kwe-"Kamp Kapelica" ebizwa nge-toponym eyayisetshenziswa kusukela ezikhathini zasendulo.
Ikamu lisendaweni ethule yase-St. Filip no-Jakov, eqhele ngamamitha angu-10 ukusuka olwandle.
Ngaphakathi kwe-mini camp kukhona nezindawo zokuhlanzeka kanye nekhishi.
Ikamu elincane iKapelica liqhele ngamamitha angu-150 ukusuka emgwaqeni omkhulu, futhi ngenxa yalokho ihlukile ngoba ayinawo yimuphi umsindo wethrafikhi. Okuhlobisa le nkambi ukuthi ihlanganiswe ne-olive grove futhi itholakala ogwini lolwandle.
Ikamu lisendaweni ethule yedolobha, cishe i-800m ukusuka enkabeni, indawo yokudlela eseduze yi-150m, ibha yolwandle engu-150n ...
UFilip Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Sveti Filip i Jakov namaphethelo